Waa waqtigii Qorshaha C: Isku hagaajinta miisaaniyadaada suuqgeyneed waqtiyada qalalaasaha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Analytics/Waa waqtigii Qorshaha C: Isku hagaajinta miisaaniyadaada suuqgeyneed waqtiyada qalalaasaha
Waa waqtigii Qorshaha C: Isku hagaajinta miisaaniyadaada suuqgeyneed waqtiyada qalalaasaha
Kacdoonkii caalamiga ahaa ee lama filaanka ahaa ee uu sababay masiibada COVID-19 ayaa ku riixday warshadaha inay qarka u saaran yihiin, shirkado badana waxay ku qasbanaadeen inay tuuraan Qorshaha A oo xitaa ay dejiyeen xeeladaha Qorshaha B daaqadda. Taasi waa sababta oo ah, marka ay timaado maareynta ururkaaga suuqgeynta iyada oo loo marayo dhibaatada miisaankan, waxay la macno tahay in lagu bilaabo "Qorshaha C".
"Mar walba waxay kuu noqon doontaa wax ku ool ah inaad haysato doorashooyin aad ku bilaabi karto inaad dhisto ka hor intaanad argagixin sababtoo ah waxaad samayn doontaa go'aamo macquul ah marxaladaha hore," ayuu yiri Michael Trapani, oo ah agaasimaha sare ee alaabta. suuqgeyn loogu talagalay Acoustic.
Sida laga soo xigtay Trapani, oo wadaagay fikradahan inta lagu guda jiro bandhigiisa cinwaankiisu yahay "Sida loo Maareeyo Miisaaniyadda Suuqgeynta Inta lagu jiro Xiisad" shirkii MarTech ee dhowaan, furaha ayaa ah inaad abuurto Qorshe C ka hor intaadan u baahnayn.
Kuwa uu masiibada ku hayo ilaalo, hadda waa wakhti muhiim ah oo lagu hubinayo inaadan indhaha ka qarsaneyn mar kale maadaama ururo badan ay si qoto dheer ugu jiraan qorshaynta dayrta ee Janaayo 1 ee sanadka soo socda.
"Hadda, tani uma baahna inay noqoto ficil kali ah, waa inay noqotaa hawl kooxeed. Fikradaha ugu fiicanna waxay ka iman doonaan dadka kaa fikir duwan,” ayuu yidhi.
"Waxaa laga yaabaa inaadan ka fekerin dhammaan xaaladaha, gaar ahaan ururada kale ee shaqeeya, maaha kaliya suuq-geynta. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad lumiso qaar ka mid ah shaqaalahaada iibka. Hagaag, hadda waxaad u baahan tahay inaad beddesho moodelkaaga haddii dhuumahaagu ay si sax ah u taageeri doonaan shaqaalaha iibka. Markaa waa muhiim in dhammaanteen aan ka fikirno fikradaha kale iyo fikradaha laga yaabo inay gacan ka geystaan ​​abuuritaanka Qorshahan C. ”
In kasta oo masiibadani ay noqon karto tusaalaha ugu dambeeya ee dhibaatada, waxaa jira sababo badan oo shirkaddu u baahan karto inay si degdeg ah hoos ugu dhigto miisaaniyada. Marka la eego sida aad u maareyn karto taas ururkaaga, Trapani wuxuu sheegay inay muhiim tahay in la qiimeeyo fursadahaaga.
"Waxaan soo jeedin lahaa mar kasta oo ay timaaddo soo saarista miisaaniyad aad uga duwan tii aad markii hore qorsheynaysay ee dib ugu noqoshada yoolalkaaga si nadiif ah waa inaadan soo saarin hal miisaaniyad laakiin inaad soo saarto saddex," ayuu yidhi.
"Aan nidhaahno su'aashaadu waxay ahayd 20% dhimis. Muuqaalka koowaad wuxuu noqon doonaa qiyaastii 5% ilaa 10% ka sarreeya dhimista la weydiiyay."
Asal ahaan, taasi waa dhacdo aad u soo bandhigto CFO taas oo qancisa codsiga dhimista miisaaniyada laakiin sidoo kale hubinaysa in waaxdaadu ay ku dhufan karto yoolalka waxqabad ee hadda jira.
Xitaa haddii CFO-du aysan u socon, "waa muhiim inaad haysato ikhtiyaar ay ku jiraan isku dayga ugu fiican ee aad ku dhufatay yoolalkaaga jira ka hor intaysan dhicin dhibaato kasta. Haddii ay dhacdo in arrimuhu ka beddelaan aragtida kooxda maaliyadda, waxaad hore u haysataa qorshe majarafad diyaar u ah haddii ay wax isbeddelaan, ayuu yidhi.
Kadibna waxaa jira xaalad laba, halkaas oo aad si buuxda u dhimayso miisaaniyada sida lagu codsado. Xaaladdan oo kale, isbeddello istaraatiijiyadeed waa in lagu sameeyo waaxda.
Dhacdada saddexaad adigaa iska leh mana aha in lala wadaago CFO-gaaga. Xaaladdan, samee miisaaniyad xitaa ka hooseysa tii markii hore la codsaday.
"Dhammaan uma badna inaad u baahan doonto inaad hal mar yarayso," ayuu yidhi Trapani. "Helitaanka muuqaalkan ayaa runtii kaa caawin doona inaad si adag uga fikirto waxa aad u baahan karto inaad sameyso haddii kiiskii ugu xumaa uu dhaco. Gunno ahaan, waxay kaa dhigi doontaa inaad ka fiicnaato inaad gooyso 20% kaliya."
Sida Trapani uu kor ku sheegay, samaynta dhimista la codsaday ee miisaaniyada suuq-geynta waxay u badan tahay inay la macno tahay beddelka xeeladahaaga si aad u muujiso boorsada fudud ee aad ka soo jiidanayso. Marna ma noqon doonto hab fudud.
"Ma isku dayi kartid inaad Qorshaha A ku sameyso lacagta Plan C," ayuu yidhi. "Waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad wax badan ku sameyso lacagta saxda ah, taasina waxay la macno tahay in bartilmaameedkaagu uu yaraan doono hadafyada aad qorsheyneyso inaad gaarto waxay ka yaraan doonaan wixii aad la gashay."
Bilawga, kala hormari tirooyinka waaweyn marka hore. Kuwani waa waxyaabo ay ka mid yihiin warbaahinta lacagta lagu bixiyo, hawlaha suuq-geyneed ee munaasabadaha waaweyn, iyo maalgelinta martech. Laakiin xitaa meelahaas, Trapani wuxuu yidhi, iska hubi inaad ka fikirayso inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato maalgashigaaga.
"Hubi in aad keenayso ciyaartaada A-ga fursad kasta sababtoo ah taasi waa waxa ugu waxtarka badan."
Marka labaad, ha u hoggaansamaan hadafyadaada.
"Wax walba oo ka yimid ujeedooyinka ganacsiga ee aad leedahay, ha ahaato iibkayaga, hadday kuwa yihiin beddelaad, hadday yihiin cusbooneysiin ama kordhinta daacadnimada macaamiishaada… ku celi yoolalkaas go'aannadaada," ayuu yidhi.
Ugu dambeyntii, u oggolow qalabka suuq-geyntu inay kaa caawiyaan sidii aad u gaari lahayd yoolalkaas. Taas waxaa ka mid ah adeegsiga aaladaha sida aaladaha otomaatiga ah si ay kaaga caawiyaan inaad wax badan qabato. Matoorada shakhsiyaynta sidoo kale waxay u fiican yihiin in otomaatig loogu sameeyo baadhista nuxurka iyo maaraynta mashruucu waxay ka caawin karaan kooxaha inay si hufan u shaqeeyaan.
"Waxaa jira qalab badan oo halkaas ka jira oo runtii kaa caawin kara inaad si caqli badan u shaqeyso, gaar ahaan haddii aad la shaqeyneyso shaqaale la dhimay ama miisaaniyad la dhimay."
Sida Trapani hore u sheegay, kuwani waa go'aano adag, laakiin waa inaad si kalsooni leh ula xiriirtaa.
"Waxaad heshay kan," ayuu yidhi. "Xirfadaha saxda ah iyo dhaqamada saxda ah, waxaad qaadan kartaa xaaladan adag ee aad ku sugan tahay, wax ka baro oo waxaad ka heli kartaa natiijooyinka ganacsigaaga, shirkaddaada, iyo kooxdaada aad raadinayso."
"Marka si qoto dheer u neefso, neefso, oo shaqada tag."
20ka Koorso Nakhshad Shabkada Ugu Wanaagsan 2021 (Bilaash iyo Lacag)
Aasaasaha CopySmiths ee Suuqgeynta Macluumaadka ee Nambarada
Google Analytics 4: Hagaha Warbixinta Helitaanka Gaadiidka
4ta caqabadood ee ugu sareeya xogta ee macaamiisha wakaalada
Sida suuqleeyda lacagta leh ay ula dagaallamaan Mareegta been abuurka ah
17 khaladaadka hagaajinta nuxurka ee saameeya ROI
Sida beddeladaada PPC ay u saameyn doonto iyada oo aan la cabbirin sirta-koowaad
Webinar: Calaamadee waxqabadkaaga warbaahinta bulshada si aad u noqoto mid tartan leh
Waa maxay sababta ay tahay inaad siiso Google Analytics 4 fursad
Webinar: Ka gudub caqabadaha xogta dhinac saddexaad ee guusha CX
Sida isbeddelada qarsoodiga ahi u saameeyaan B2B suuq-geynta lacag bixinta
GA4 ma aha waxa la dilaacay oo dhan. Sidee bay u ekaan lahayd in la beddelo?
Qiyaasta waqtiga dhabta ah ee Google Universal Analytics hadda cinwaan looga dhigay "5tii daqiiqo ee ugu dambeysay"
Sida loo sameeyo warbixinta degitaanka GA4 ee 10 tillaabo fudud
Sirta lagu gaaro guusha omnichannel
Sida liiska hubinta SEM-ka ee iskii u baari karo uu shaqadaada uga ilaalin karo hantidhawrka dibadda
Markaa ma waxaad u malaynaysaa inaad tahay garaadka martech?
Ku dar-dar gelinta toosinta safarka macaamiisha ee khariidaddan CDP
Sare u qaad fanka imtixaanka A/B
U sareeyo farshaxanka cilmi-baarista agile si aad u cusboonaysiiso, u cusboonaysiiso oo u koraan
Ku wanaaji khibrada safarka macmiilka talaabooyinkan la xaqiijiyay
Google ayaa daaha ka qaaday hab fudud oo ay isticmaalayaasha Yurub ku diidi karaan cookies
Arrimaha daahitaanka wakhtiga dhabta ah ee Universal Analytics si buuxda looma hagaajin doono, ayuu yidhi Google
Daar xogta macmiilka adiga oo isticmaalaya aragtiyaha wakhtiga-dhabta ah ee kanaalada kala duwan
Isku xirka xogta heerka shaqsi si loo keeno natiijooyin muuqda
Google wuxuu soo saarayaa agab guuritaan ee Google Analytics 4
Falanqaynta Google waxay xaqiijinaysaa dib u dhac kale oo warbixinta maanta
5 siyaabood oo la xaqiijiyay oo kor loogu qaadayo heerarka beddelka 2022
Google wuxuu sheeganayaa inuu hagaajiyo arrimaha daahitaanka Google Analytics
Waa maxay sababta macaamiishaadu ula halgamayaan ka warbixinta suuq-geynta
Xogta ugu sareysa iyo isbeddellada falanqaynta ee suuqgeynaha koowaad ee dhijitaalka ah
Google Analytics 4 ayaa si toos ah u soo jeedinaysa helitaanka warbixin degdeg ah
Raadi suuqleeyda, diyaar ma u tahay inaad ku cabbirto natiijooyinka duni aan cookie-ka lahayn?
Bilow inaad ku guulaysato ka-qaybgalka macaamilka wakhtiga-dhabta ah ee cabbirka
Twitter iyo Talkwalker: Isticmaalka fikrado dhaqameed si aad u hirgeliso istiraatiijiyaddaada
Inta badan waxay qorsheynayaan inay ku adkeeyaan u beddelashada Google Analytics 4
AIOSEO WordPress plugin wuxuu isku daraa Microsoft Clarity
Cabbiraadda adduunka aan cookie-ka lahayn: diyaar ma u tahay waxa soo socda?
Xogta kooxda koowaad: 4 hubin gudaha ah si loo hubiyo inaad diyaar u tahay
Xogta CRM waa khariban, laakiin way is nadiifin kartaa
Google wuxuu baabi'inayaa Falanqaynta Caalamiga ah Luulyo 1, 2023
Google ayaa soo saartay Xayeysiiska Raadinta 360 isdhexgalka Google Analytics 4
Cabbiraadda qiimaha suuq-geynta ee adduunka aan cookie-ka lahayn
Waa maxay sababta aan ugu faraxsanahay in buskudka qolo saddexaad ay dhimanayaan
Ha seegin waxa run ahaantii macaamiishaadu rabaan
Google ayaa soo bandhigtay Google Analytics 4 bog guri oo cusub
Falanqaynta nuxurka cusub ee dhowaan imanaysa LinkedIn
Google wuxuu siidaayaa Data Studio Dashboard ee Sheekooyinka Shabakadda
Ka fogow qalalaasaha aqoonsiga adiga oo baranaya macaamiishaada
Hadda waxaad ku xidhi kartaa Google Analytics 4 ilaa Google Search Console
Maxay tahay in suuqgeynayaasha dhijitaalka ah ay ka ogaadaan Google Analytics 4